download Antivirus Free 2019 - Scan & Remove Virus, Cleaner APK yakamuva version 1.4.3 yamadivayisi we-android - ApkZip.com
Ukuphepha Kwamaselula nge-Antivirus, i-Virus cleaner, i-Phone cleaner, i-AppLock.
4.7 (95.0%) 1,082,255 Amavoti
I-Antivirus yamahhala 2019 - I-Virus Scan & Ukususwa, i-Cleaner ukuphepha kwefoni nohlelo lokusebenza lwe-antivirus, eligcwele i-Virus Cleaner, i-Virus Protection, i-Junk Cleaner. Ngokunikeza izinsizakalo zokuphepha ezinamandla, livikeleka ifoni yakho ngesikhathi sangempela.
Ukuthenjelwa ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingu-8 emhlabeni wonke , inikeza unqulo wesi arab ochwepheshe kumasevisi wezokuphepha wefoni kanye nefoni kufaka phakathi i-antivirus, i-virus cleaner, i-virus scan kanye nokususwa kwegciwane, ihlanzekile yocingo kanye nehlanzekile okungenamuthi, i-app locker. Uhlelo lokusebenza lwe-antivirus kanye nesofthiwe yokuphepha.
I-Antivirus yamahhala engu-2019 - Iskena se-Virus kanye nokususwa, Izici zokugqamisa ze-Cleaner:
🛡️ Unqulo wesi arab kuphela Ukuskena kwe-Virus nokususwa kwegciwane ukuze uvikele ifoni yakho. I-antivirus enamandla ye-Android nesofthiwe ye-antivirus enikezela ngezinsizakalo zokuphepha - ukuvikelwa kwegciwane nokuhlunga igciwane.
🗑 Isihlungi sefoni Isihlungi se-Junk. I-junk ne-cache ehlanzekile.
🔒 I-Locker Lokusebenza Iskrini sohlelo lokusebenza, isofthiwe yokuphepha, ukuphepha kwefoni
Details Imininingwane ewusizo: 🌟
💎 isofthiwe ye-antivirus, uhlelo lokusebenza lokuphepha
I-Antivirus yamahhala 2019 - I-Virus Scan & Ukususwa, i-Cleaner inikeza amasevisi wokuphepha angu-24/7. I-antivirus yayo ihlose ukususa futhi isuse amagciwane, inikeze isevisi yokuphepha. I-antivirus enamandla ye-Android ikunikeza ukuvikelwa kwegciwane lochwepheshe nokuhlanza igciwane. Kuyinto software professional unqulo wesi arab nge engine professional unqulo wesi arab.
💎 I-Antivirus, ihlanzekile yocingo - i-junk cleaner ne-cleaner system
Njengesofthiwe ye-anti-antivirus professional kanye nohlelo lokusebenza lokuvikela, luhlanganisa kokubili amasevisi wokuphepha we-Antivirus nezinsizakalo zokuphepha zefoni. Isofthiwe ye-anti-antivirus Professional, i-virus cleaner yezokuphepha kwefoni, kanye ne-antivirus lokusebenza inikeza i-antivirus, i-virus cleaner, ukuvikelwa kwegciwane, i-junk cleaner ukusula amafayela angenalutho ngokuthepha. Ngokufunda / ukubhala izimvume zesitoreji zangaphandle, uhlelo lwethu luvunyelwe ukuskena nokususa amafayela angenalutho agcinwe ekhadini lakho le-SD.
💎 Isaziso soSaziso
Isaziso sokuhlanza sihlanza isaziso esingadingeki. Njengesofthiwe ye-antivirus (i-antivirus enamandla), uhlelo lokusebenza lwe-cleaner neyokuphepha, linikeza nge-antivirus mahhala, ukuvikelwa kwegciwane, ukuhlanza ifoni.
💎 I-App Locker - Ukuphepha kwe-Security
I-app eydijithali ivikela isevisi yobumfihlo yomuntu siqu, evala izinhlelo zokusebenza ngamaphasiwedi aphephile, Ngemvume yekhamera, i-Antivirus Free 2019 izothatha ngasese isithombe somuntu ovula izinhlelo zokusebenza ngephasiwedi engafanele. Isithombe sizoboniswa kuwe kuphela ukuze ubambe lo curious!
💎 I-Call Blocker Nomsizi
Yenza ngokwezifiso izinombolo kuhlu lwakho olumnyama bese uvimbela izingcingo ezingadingeki. Ngekholi, Ukuthintana nokufunda izimvume ze-Phone State, I-Antivirus Free 2019 inganikeza usizo olunamandla lwekholi.
💎 Ukwaziswa Komsebenzisi Okungcono
Njengoba i-antivirus yezobuchwepheshe, i-Antivirus Khulula yama-2019 inikeza okunembile kakhulu, amasevisi asendaweni ngendawo, indawo eyingozi futhi uthole izimvume ze-akhawunti, ekhonza umgomo wokuthuthukisa isipiliyoni somsebenzisi.
I-Antivirus yamahhala engu-2019 - I-Virus Scan & Ukususwa, i-Cleaner : Ukuphepha okunamandla namandla we-antivirus ku-Android enikeza unqulo wesi arab ochwepheshe kanye nezinsizakalo zokuphepha!
📮Ukugxekwa kuyamukelwa ngaso sonke isikhathi.
Uma uneziphakamiso, sicela uxhumane nathi ku: